အင်တာဗျူး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 18
ပေးဆပ်သူတဦးရဲ့ ထာဝရအနုပညာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ ကျော်သူ နဲ့ မေးခွန်းများ အပိုင်း ၁ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ညနေခင်းမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ရဲ့ ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူနဲ့ မိုးမခမီဒီယာတို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရဲ့ မြို့တော်တခုဖြစ်တဲ့ ဒဗ္ဗလင်မြို့ကို ကိုကျော်သူ ခေတ္တရောက်ရှိခိုက်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီရဲ့ လူမှုရေး အလှူဒါနဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသူ ကိုကျော်သူနဲ့ တွေ့ဆုံရချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး အမှတ်တရပြောဖြစ်တာကတော့ ၂၀၁၀ ဇွန်လတုန်းက ပဲခူးဒေသ ရေရှားပါးဘေးဒဏ်သင့်ချိန်မှာ ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများက ရန်ပုံငွေပွဲပြုလုပ်ပြီး အလှူငွေရှာခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်တုန်းက ကိုကျော်သူ၊ မရွှေဇီးကွက်၊ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တို့...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလှည့်လည်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ စည်းရုံးလှုံဆော် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့မြင်ရလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒေါက်တာဦးခင်မောင်ကြီး (ယေးတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာသင်ကြားပေးနေသူ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ယေးတက္ကသိုလ်၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်) No tags for this post.
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အတွက် ဂုဏ်ပြုစကား ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ အရင်ကတော့ ဒေါ်စုရဲ့အခြေအနေနဲ့ ဇွဲသတ္တိကို “ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ မဗေဒါက တစ်ပင်တည်း အယက်အကန်ခံလို့ ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပဲ” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးဇော်ဂျီရဲ့ကဗျာနဲ့ တင်စားဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့အခြေအနေမှာတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒေါ်စုရဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာ ပြည်သူ အားလုံးက တခဲနက် တက်တက်ကြွကြွ ပူပေါင်း ပါဝင်ကြိုဆိုကြတာကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒေါ်စုဆိုတာ ဗေဒါပင်လေးတပင် မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ မြန်မာ့ကောင်းကင်မှာသာမက ကမ္ဘာကောင်းကင်မှာပါ ထိန်လင်းသွားလောက်အောင် ကြယ်အပေါင်း ခြံရံထားတဲ့ လပြည့်ဝန်းကြီးလို့တောင် ဆိုနိုင်လောက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ကောင်းကင်ပြင်မှာ အုံ့ဆိုင်းမှုံမှိုင်းနေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊...
နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview)
နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (မြန်မာပြည်က ပြန်လာတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ နုနုနဲ့ ငယ်ငယ်) မိုးမခအင်တာဗျုး၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ အမေရိကန်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မြန်မာပြည်၊ နွယ်ခွေရပ်၊ မေတ္တာနန္ဒ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်းမှာ ၂လ လုံးလုံး သွားရောက်နေထိုင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းခဲ့သူ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာက မြန်မာနွယ်ဖွား၊ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသူ နုနု နဲ့ ငယ်ငယ်တို့ကို သူတို့ မိဘများနဲ့အတူ သူတို့မိသားစု အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအမြင်တွေကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖရီးမောင့်မြို့၊ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု ကျော် ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်တဲ့ ကိုဇော်မင်း၊ မခင်ခင်ထွေး မိသားစုတို့ဟာ မြန်မာပြည်ကမိသားစုကြီးတခုလို မိဘ၊ ဘုိုးဘွား၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊...
အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နောက်လိုက်တွေရဲ့ စည်းရုံးရေး အတော်ခရီးရောက်နေပြီလား။ ညီလာခံလုပ်မယ်ဆိုကာမှ အချင်းချင်းတွေကြား ဆန္ဒပြတာတွေ၊ ကန့်ကွက်တာတွေ ကြားနေရတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း၊ ပါတီကို ထူထောင်ပြီးနောက်မှာ ပါတီညီလာခံတွေ လုပ်ဖို့ ကျိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကို စစ်အစိုးရက ဖြိုခွဲတားဆီးခဲ့တယ်။ ပါတီညီလာခံလိုင်းတွေ မအောင်မြင်ခဲ့တော့ ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပဲ ဆက်ပြီး ဦးဆောင်မှုပေးပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်။ အဲသည်နောက်က ပါတီဝင်တွေက ရှိပြီးသား စုဖွဲ့မှုနဲ့ပဲ နောက်ကလိုက်ကြရတယ်။ ဒီလိုပဲ ရုန်းရုန်း၊ ရူန်းရုနူ်းနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတယ်။ အပေါ်ပိုင်းက ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောင်းလဲမှုမရှိပေမယ့်၊ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာတော့ သူ့ဖာသာသူ အပြောင်းအလဲတွေတော့ ရှိခဲ့တယ်။ အဲသည်လိုနဲ့ ပါတီကို ၂၀၁၀...
“ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည် မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ်စရာနာမည်သက်သက်ပါပဲ” – talk with Dr. Jacques P. Leider – part one
Yangon Press International သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ ရခိုင်အရေးအခင်း နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြား ပညာရှင်တဦး၏ အမြင်-အင်တာဗျူး၊ အပိုင်း (၁) ဥာဏ်လင်း နှင့် ဇေယျာလှိုင်တွေ့မေးသည်။ “ပဋိပက္ခကအသစ်မဟုတ်ဘူး။ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတဲ့အနေအထားထိ ရောက်သွားတယ်” Tags: ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင်
ဦးဝင်းတင်၏ ၈၈ – ၂၄နှစ် အထ်ိမ်းအမှတ်စကား ရုပ်သံ
ဘားမားဗီဂျေ၊ သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီ နာယက၊ သတင်းစာဆရာ၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က သြဂုတ်လ ၈၊ ရန်ကုန်မြို့၊ တော်ဝင်နှင်းဆီခြံတွင် ပြုလုပ်သော ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံ ၂၄ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားမှာ အမှတ်တရစကား ပြောကြားရာမှာ … ပြည်သူုတွေကို ဦးထိပ်တင်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မပစ်ပယ်သင့်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ရှေ့တန်းကို ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အနှစ်သာရကို ဖော်ဆောင်ဖို့လိုကြောင်း၊ အာဏာရှင်စနစ် ဖယ်ရှားရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်စွဲ ချိုးကပ်နေသော မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်ချိုးတွေကို ခွာပစ်ဖို့၊ အာဏာရှင်စနစ်၏ ညှော်နံများကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ No tags for...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် CNA ရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (CNA)
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၂ by Yangon Media Group ရန်ကုန်မီဒီယာဂရု(ပ်) သတင်းအဖွဲ့ ရိုက်ကွင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် – ခင်ဗျားတို့ CNA အနေနဲ့ကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ CNAသတင်းဌာနကို လူကြည့်တော်တော်လဲများပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကြည့်ကြတာများပါတယ်။ ဒီလိုအင်တာဗျူးလာရောက်လုပ်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။ CNA – ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဃဗြသတင်းဌာနအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းများကို ရယူထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဃဗြသတင်းဌာနအနေနဲ့ ကျွန်မအပါအ၀င် စင်ကာပူတို့၊ ဘန်ကောက်အခြေစိုက်တို့က သတင်းသမားတွေက မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ပြီးတော့ သတင်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ် ငန်းစဉ် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတို့လို ပြည်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး သတင်းရယူထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုလို့ ကျွန်မတို့များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။...
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မဆုံဖြစ်တာ ဇွန် ၂၂ ကတည်းကပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ်၊ လွှတ်တော်သို့ ဇူလိုင်လဆန်းမှာ ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်၊ ၁၉ ဇူလိုင် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားအဖြစ် အစိုးရနဲ့အတူ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ သိုင်းဝန်းစွာ ကျင်းပ စတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူ ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလှိုင်းဂျာနယ်နဲ့တကွ ပါတီညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေး၊ အထွေထွေသော လှုပ်ရှားမှုများမှာ ဇယ်ဆက်သလို အလုပ်များနေတာကြောင့် စကားပြောဖြစ်ဖို့ အချိန်လည်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရပါ။ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ဖြင့် ဆရာနဲ့ ကြိုးစားပြီး ချိန်းတွေ့ စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ မေး။ ။ ဒီနေ့ကကော ဆရာဘာတွေ အလုပ်များနေသလဲ။ တခြားစကားတွေ မပြောခင် ဆရာဘာတွေနဲ့ ဒီနေ့...
ဦးအောင်သိန်းလင်း အင်တာဗျူး – Southern Weekly of China
ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ Southern Weekly အွန်လိုင်းတွင် မကြာသေးမီက တရုတ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဦးအောင်သိန်းလင်း အင်တာဗျူးကြောင့် စာဖတ်သူအများအပြား အံ့အားသင့်နေကြသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အခြေခံဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး No tags for this post.
Page 18 of 21«1...1617181920...21»
အဝေးရောက်နေဆဲ က၀ိအို ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့ အင်တာဗျူး
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ - အတိုက်အခံလုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး တဲ့လား
"ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည် မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ်စရာနာမည်သက်သက်ပါပဲ" - talk with Dr. Jacques P. Leider - part one
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) - ပညာပေးတဲ့အလုပ်က ပြီးသွားပါပြီ (အင်တာဗျူး)
အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ● နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ ဆွဲခေါ်ပါ (အင်တာဗျူး)
ဦးအောင်သိန်းလင်း အင်တာဗျူး - Southern Weekly of China
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) - ရွေးကောက်ခံအာဏာရှင်စနစ် ပေါ်မယ့်အလားလာ တွေ့ရတယ် (အင်တာဗျူး)
ဂီတပညာရှင်ကြီး ဒေါ်မာမာအေး အမေရိကန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ချိန် စကားစမြီ
Interview with U Win Tin - ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အောက်ရေလှန်ခြင်း (back-wash) များ
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ရဲ့ ပြောင်းဖူးလေ … ပြောင်းဖူး .. https://t.co/kPI2TRh7hB https://t.co/GIdYenno9d about 35 minutes ago ReplyRetweetFavorite